Iphupha lokukhohlisa Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, ukukopa yinto engenziwanga, engaziphathi kakuhle, engenabulungisa neyohlwayayo. Umntu okopayo uthathwa njengomntu ozingcayo othi, ngaphandle kwelahleko okanye iimvakalelo zabanye, angqinele iimfuno zakhe kwaye afune ukufezekisa iinjongo zakhe ngazo zonke iindlela.
Ukongeza kwezi zixhumanisi ngokubanzi, izicupho zingadlala indima ekuchazeni iphupha. Kodwa ngaba umntu okopela ephupheni ikwangumntu ombi kubomi bokwenyani? Isenzo sinokuchazwa njani njengomqondiso wephupha?
Umfanekiso wephupha "ukukopela" unokuba neentsingiselo ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwimeko ethile yephupha. Nanga amaphupha axhaphakileyo ahambelana nesimboli kuqala:
1 Uphawu lwephupha «umgibe»: elona phupha liqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ngubani okopayo kumaphupha akhe
1.1.1 Zivumele ukhohliswe. Kutheni uphupha ukukhohliswa?
1.1.2 Ukukopela komnye umntu - yenza ngokungafanelekanga ephupheni
1.2 Ukukopela kunye nokukhohlisa kwimibutho yamaphupha
1.2.1 Ukungcatshwa ngumhlobo kunye neqabane. Ngaba yayisisilumkiso?
1.2.2 Ukuzonwabisa emtshatweni: oko kukuthi emva kwephupha
1.2.3 Kuthetha ukuthini ukukhohliswa kwiphupha elikhulelweyo
1.2.4 Kuqala wangcatshwa, emva koko washiywa, hayi indlela elibi ngayo!
2 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umgibe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umgibe»: elona phupha liqhelekileyo malunga nesimboli
Ngubani okopayo kumaphupha akhe
Zivumele ukhohliswe. Kutheni uphupha ukukhohliswa?
Nabani na ophupha ngokungcatshwa kufuneka alumkele iintshaba zakhe kungekudala. Ngokwesiko iphupha lokuqhankqalaza "Siskemu" kunye nokungcatsha into yokuba umntu azame ngazo zonke iindlela ukwenza ubomi bube nzima kulowo uleleyo. Impindezelo yoku iya kuba nempumelelo ukuba umntu unokufumana ngempumelelo inkohliso ephupheni.
Ukukopela komnye umntu - yenza ngokungafanelekanga ephupheni
Isimboli yephupha "ukukopela umntu" inokutyhila ingxabano yangempela yephupha, efuna ukwenza inzuzo ngokukhohlisa. Nayiphi na inzuzo evela kubuqhetseba kungekudala iya kugutyungelwa kukuzisola. Ke eli phupha linokuqondwa njengophawu lokwenza ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
Ngubani ekuphupheni ukukopela kumdlalo, unokuziva unqwenela ukuziphindezela komnye umntu. Ukuba umntu uphupha ngokubanjwa ekopa kwaye ezisola ngokungahambi kakuhle kwakhe, kukho imiqondiso yeenguqu ezintle, impumelelo kunye nemvisiswano kwimeko yezentlalo.
Ukukopela kunye nokukhohlisa kwimibutho yamaphupha
Ukungcatshwa ngumhlobo kunye neqabane. Ngaba yayisisilumkiso?
"Uyandiqhatha!" - amaphupha apho umhlobo akhohlisayo abonisa, kwiimeko ezinqabileyo, inkohliso yokwenyani kumhlobo wakhe. Endaweni yokuphupha ukukopela. Awumthembi lo mntu ngokungathi unokuba nolwalamano oluhle. Nangona kunjalo, isenokuba ngamava amabi ngokwenene ngasemva kwale ngxaki.
Ukuba uyamazi umntu akhohliswa ngumhlobo wakho, ungammonela loo mntu ngenxa yeempawu ezithile, ubuchule, okanye inkangeleko yakhe. Kule meko, kuya kuba kubalulekile ukwakha ukuzithemba. Ukuba iqabane liba ngumphambukeli ephupheni, uloyiko lokulahleka lukwanxulunyaniswa nalo mfanekiso wephupha.
Ukuzonwabisa emtshatweni: oko kukuthi emva kwephupha
Ukuqhathwa ngumyeni wakho akuziva kuyinyani kuphela kodwa nakwamaphupha. Akuqhelekanga ukuba abo bachaphazelekayo bazibuze ukuba iphupha linokuthetha ukuba indoda okanye umfazi uyabakhohlisa, akathembekanga kwaye ulala namanye amabhinqa okanye amadoda.
Nangona kunjalo, oku kunqabile ukuba kuthetha iphupha lokukrexeza. Endaweni yokuba, umfanekiso wephupha "okrexezayo" ubhekisa kukungazithembi kukabani. Unoloyiko lokuba awusenakulunga ngokwaneleyo, kwaye awuzukulunga ngokwaneleyo kwiqabane lakho. Ukuthetha nje ngokunyaniseka neqabane lakho kunokunceda ukusombulula le ngxaki.
Kuthetha ukuthini ukukhohliswa kwiphupha elikhulelweyo
Ukuba iqabane lobomi lenza i-adventure ephupheni ngexesha lokukhulelwa kwakhe, oku kwenzeka kwiimeko ezinqabileyo ngenxa yothando oluthambileyo. Iphupha lingaphezulu komqondiso oqhelekileyo wokuba umntu ekuthethwa ngaye uhlala ezivumela ukuba enze kakhulu el mundo yomlindo. Iphupha linika ithuba lokuzoba imida emitsha yobuqu.
Kuqala wangcatshwa, emva koko washiywa, hayi indlela elibi ngayo!
Isimboli yephupha "ukukhohliswa nokushiywa" ibonisa kwiimeko ezininzi ukungoneliseki luluntu lwakho. Awuziva mnandi, mhlawumbi unqwenela ukusondela ngakumbi. Usenokucinga nangokuzahlukanisa. Iphupha kufuneka likukhuthaze ukuba ubuze iimvakalelo zakho ngakumbi. Kutheni ungonwabanga? Ngaba iqabane lakho alikwenzeli nto? Kwaye ukuba kunjalo, kutheni iziphumo ezingakhange ziphunyezwe ukuza kuthi ga ngoku?
Nabani na okopayo ephupheni, ngokwembono ngokubanzi, uya kuba ngumzekeliso kungekudala. «Fumana imali ngokukhawuleza«. Elingalindelekanga likulindile isoNangona kunjalo, oku akunakuhlala ixesha elide. Ngapha koko, uphawu lwephupha lukwabonisa ukuba umntu uceba ukwenza into engalunganga, Abangakholwayo kwenziwe ntoni.
Umntu ekuthethwa ngaye kufuneka azive enyanzelekile ukuba ayeke ukwenza oku kwaye aqhubeke nokunyaniseka kwimilinganiselo yakhe yokuziphatha. Ukuba uphumelele, isikhundla sakho eluntwini siza kuphakama kwaye uyakuthathwa njengomntu obekekileyo. Ngaphandle koko, igama lakho liya konakaliswa kakhulu.
Ukongeza, ukukopela ephupheni kunokunxulunyaniswa nokuziphatha kobuchwephesha kulowo kuthethwa ngaye. Unokuzimisela ukuthatha ithuba kumqeshi wakho kwaye ube sisityebi ngeendleko zakhe. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ngaba le ndlela yokuziphatha ixabiseke ngokwenene, okanye ukuba ukhetha ukusebenzela iinjongo zakho ngokufanelekileyo, njengaye wonke umntu.
Nangona kunjalo, ukuba umntu ubanjwe ephupheni ngenkohliso, oku kunokuqondwa njengokuqinisekileyo ngokwentetho ngokubanzi: oku kubonisa phuhliso Oku kuya kuthatha amaphupha akho ngakumbi ebomini kwaye ube nefuthe eliluncedo kwimeko yakho yezemali. Ukuba ubonakalisa ukuzisola ephupheni ngelixa ukopela, kunokwenzeka ukuba ujongene nentlanganiso emnandi kunye nabahlobo.
Ukuba umntu uphupha ukuba uyakopela umdlali welinye iqela kumdlalo, onjengomdlalo we-poker, oku luphawu lokuba lo mntu kuthethwa ngaye uziva ekhathazekile ngomnye umntu kwaye ngoku uyalandela ukuziphindezela ibhulukhwe ende. Kubuhlungu kakhulu okwenziwe ngomnye umntu kuwe.
Ukuba umntu ukhohlisiwe liphupha, oku kunokuba luphawu, ngokwembono yengqondo, yokuba banokuba nakho okuhle ebomini bokwenyani. Phulukana nomhlobo iba. I-subconscious iyayiqonda into yokuba umntu unokubenzakalisa abanye ngokuziphatha kwabo kwaye ke woyikise ngokutshabalalisa ubudlelwane obusondeleyo.
Ngapha koko, iingcali zengqondo zibona kumqondiso wephupha umqondiso wangaphakathi. ukujongana. Iqela elinomdla liyazikhohlisa ngokuzibandakanya kumathemba obuxoki kunye namaphupha, apho engazi kakuhle ukuba, ngokuqinisekileyo, ngekhe azalisekiswe. Kuya kufuneka uzame ukuthembeka ngakumbi kuwe kwaye wamkele iinkalo ezahlukeneyo zobuntu bakho kunye nobomi bakho.
Kweli nqanaba lokutolika kusongela umkhohlisi ephupheni. ukuzikhohlisa ngokwasengqondweni. Akufanele ulahlekelwe ziinjongo zakho zokomoya kwaye kufuneka uhlale unyanisekile kwimilinganiselo yakho. Nantoni na eyenye inokubeka emngciphekweni ukukhula ngokwasemoyeni.